Nchọpụta nsogbu Check valves - China Dị ka valvụ (Tianjin)
Flange concentric urukurubụba valvụ
Grooved urukurubụba valvụ
Flanged wuru n'ụzọ pụrụ urukurubụba valvụ
Firefighting urukurubụba valvụ
Spindle urukurubụba valvụ
Resililent urukurubụba valvụ
Bs 5163 Gate valvụ
DIN F4 Gate valvụ
DIN F5 Gate valvụ
AWWA / ANSI Gate valvụ
Fire-alụ ọgụ Gate valvụ
Grooved ámá valvụ
Socket ọgwụgwụ ụzọ ámá valvụ
Large size ámá valvụ
Electric ámá valvụ
Flange ámá valvụ
Flange ego valvụ
Mmiri akara valvụ usoro
Myọcha / strainer
Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ
Igba ígwè bọl valvụ
HVAC NJIDE valvụ
Thermostat / valvụ mmetụta
Balance valvụ regulator
Ịghasa ọla kọpa valvụ
Nchọpụta nsogbu Check valves
Lelee ojiji nke usoro ga-ezute a dịgasị iche iche nke nsogbu, nke isiokwu a bụ ahụmahụ nke ọtụtụ afọ nke ọgaranya ahụmahụ engineer, achikota pụta nke ego valvụ centralized nkịtị mmejọ. Igwe anaghị agba nchara ịghasa olileanya enyi m nwere a akwụkwọ.
Nchọpụta nsogbu na ego bụ: 1 diski ezumike; 2 usoro azụ ...
Ime ka gbajiri valvụ na-eme bụ: tupu mgbe valvụ ajụ nrụgide bụ nso imegide ma ọ bụla ọzọ, "ịhụ-hụrụ" ala, na valvụ oche iti-emekarị, ụfọdụ kenkuwa ihe (dị ka nkedo ígwè, ọla, wdg) mere valvụ ọsọ ahụ e tiwara. Igwe anaghị agba nchara pipeline mgbapụta mgbochi na obibia bụ iji a na-abụghị nloghachi valvụ ọsọ ike.
Media reflux akpata: 1 akara n'elu mmebi; 2 sandwiched adịghị. Ịrụzi oru elu ma wepu adịghị, nwere ike igbochi backflow.
Akọwara n'elu na-akwanyere ndị na-abụghị nloghachi valvụ Common mmejọ na mgbochi ụzọ, nwere ike na-egwu a na-akpali akpali, bara uru iji, ga-ezute ndị ọzọ ọdịda, na-proactive na mgbanwe iji gbochie valvụ ọdịda emee, bụ isi na otu onye bụ maara ya Ọdịdị, ihe na ime edumbet.
Post oge: Aug-10-2018
Ego valvụ Olee otú Iji Zọpụta Energy?
Lelee Ọ Dịghị mwekota Connection?
Valvụ Nhọrọ Usoro